Gaas oo rajeynaya in Turkigu Puntland uga shaqeeyo sida Muqdisho oo kale – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Wafdi ka socda dowladda Turkiga oo uu hogaaminayo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Amb. Kamaludiin Koni Turan ayaa maanta tegay magaalada Growe ee caasimadda maamulka Soomaaliyeed ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland cabdiweli Maxamed Cali, ku xigeenkiisa Eng. Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar iyo gudoomiyaha baarlamanka Siciid Xasan Shire ayaa wafdiga Turkiga ku qaabilay xarrunta madxtooyada maamulkaas.
Wefdiga oo gelinkii hore ee maanta lagu soo dhoweeyey Garowe ayaa dhagax-dhigay qaybo cusub oo lagu darayo xaruunta agoonta ee Garowe, sidoo kale waxay booqdeen dugsiyada sare iyo jaamacadaha qaar iyo Isbitalka Garowe.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kulanka kadib boogaadiyey booqashada safiirka Turkiga ee Garowe, wuxuu xusay in ay jirto taariikh dheer oo si khaas ah uga dhexaysa Soomaaliya iyo dowladda Turkiga.
Gaas ayaa sheegay iney safiirka ka wada hadleen taageerada Turkiga ee Soomaaliya iyo qeybta Puntland ka helesyo, isagoo xusay in Turkiga ay kala hadleen inuu ka caawiyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha.
“Turkigu waa dadka keliya ee diyaar u ah in ay wax u qabtaan Soomaaliya, waxaan filaynaa sida ay wax uga bedeleen Muqdisho inay Puntland uga bedeli doonaan.”ayuu yiri Cabdiweli Maxamed Cali oo ay shir jaraa’id wada qabteen danjiraha Turkiga.
Dhanka kale, safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Amb. Kamaludiin Koni Turan ayaa sheegay in Turkigu mashaariic ka fulin doono Puntland, wuxuu carabka ku dhuftay in booqashadiisa dambe uu keeni doono Garoowe hay’adda horumarinta Turkiga ee TIKA.
Turkiga ayaa qorshaynaya inuu balaariyo cisbitalka wayn ee Garoowe oo safiirku maanta booqday, madaxweynaha Puntland ayaa carabka ku dhuftay in dowladda Turkiga ay diyaar u tahay in ay xili dhow dhisto dugsiyo u badan kuwa farsamada gacanta iyo goobo caafimaad.
“Puntland waxay si siman oo xaq ah u heli doontaa deeqaha Turkiga ee loo qorsheeyey Soomaaliya.” ayuu yiri Dr. Koni Turan.
Maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa inta badan ku dooda in mahsaariicda Turkiga badankeeda la siiyo magaalada Muqdisho, taasoo keentay in Turkigu booqashooyin ku kala bixiyaan Garowe iyo Hargeya oo ay horay u tageen dhowr jeer.